Sawirro: Kheyre oo shaaciyay cadadka dhaqaale oo ay XFS ku taageereyso Guddiga Taakuleynta CQS - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Kheyre oo shaaciyay cadadka dhaqaale oo ay XFS ku taageereyso Guddiga...
Sawirro: Kheyre oo shaaciyay cadadka dhaqaale oo ay XFS ku taageereyso Guddiga Taakuleynta CQS
Muqdisho (Caasimada Online)-Ra’isul wasaaraha Xukuumadda Federaalka Somalia Xasan Cali Khayre ayaa magaalada Muqdisho uga qeybgalay barnaamij ay Guddiga Taakuleynta Ciidanka qalabka sida kusoo bandhigayeen waxii u qabsoomay.
Guddiga uu dhawaan magacaabay Madaxweyne JFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa horay u qaaday talaabo dhiirigalineysa ciidamada Qalabka sida.
Ra’isul wasaare Khayre ayaa xusay muhiimadda ay Ciidamadu u leeyihiin dal kasta iyo sida Somalia ay maanta ugu baahan tahay soo celinta karaamadii ay lahaayeen ciidankeenu. Isagoona baaq ku aaddan iney ciidamadooda taageeraan u diray bulshada Soomaaliyeed, ay garab istaagaan hawlaha lagu horumarinayo dhismaha dawladnimada.
Khayre ayaa balan qaaday in Xukuumaddu ay 20 kun dollar siin doonto gudiga taakuleynta Ciidamada si loo dar-dargeliyo hawlaha gudiga.
Barnaamijka ayaa waxaa sidoo kale ka soo qeyb galay mas’uuliyiin ka tirsan labada gole ee dawladda, maamulka gobolka Banaadir, saraakiil iyo siyaasiyiin.